Tag: USD | Martech Zone
Selz waa horukac weyn oo dhanka ganacsiga ah, oo siineysa istcimaalo isticmaale nadiif ah oo fudud oo loogu talagalay iibinta waxyaabaha (soo degsashada jirka ama dhijitaalka ah) ee bulshada ama boggaaga ama bartaada. Ku darista boggooda 'paltform' waxaa lagu dhammaystiray badhanka widget ama iibsiga. Markii la riixo, isticmaalaha waxaa loo keenayaa goob aamin ah wuxuuna awoodaa inuu soo dejiyo ama dalbado alaabada ay codsadeen. Looma baahna isku-dhafid lacag-bixinno adag, rakibidda shahaadooyin sugan, ama rakibidda
Mustaqbalka wuxuu ku jiri doonaa Microsoft
Khamiista, Oktoobar 20, 2011 Khamiista, Oktoobar 20, 2011 Douglas Karr
Ma xusin Microsoft oo ku filan Martech Zone. Runtii maahan wax cudur daar ah maadaama shirkadu ay horay uheshay raad weyn. Markaad lahadleyso COO-da LiquidSpace, Doug Marinaro, iyo usbuucii hore oo aad lahadleyso Josh Waldo, Microsoft runti waxay sameyneysaa dhaq dhaqaaqyo aan caadi aheyn oo aasaas u ah milkiilaha Ganacsi Yar. Maalgashigan hore ee nolosha shirkaduhu waa mid wax badan ka tari doona mustaqbalka Microsoft. Josh Waldo ayaa ahaa